Kooky - KathaHamro
साथीको खोजमा Chapter 1
उनीसँग मेरो पहिलो भेट आर. आर क्याम्पसमा भएको थियो । मुलगेटबाट भित्र छिरेपछि बायाँतर्फ admission office निर लाइनमा उभ्भि रहेको बेला अचानक कसैले धक्का दिएजस्तो लाग्यो र पछाडि फर्केर हेरे ।
थाइकट् कपाल, बाक्लो परेला, अलि चेप्टो परको नाक, आँखामा गाजलका केही रेखाहरु, सेतो वर्णको, लगभग २५ वर्षको उमेर र करिब ५ फिट मात्र उचाई भएकी युवती आत्तिदै भन्छिन् ।
मैले खासै वास्ता गरिन ।
भर्ना तथा एक्जाम फर्म भर्न आएकाहरुको लाइन निकै लामो थियो । म आफुभन्दा अगाडि कतिजना रहेछन् भनि हिसाब गर्न व्यस्त थिए ।
“तिमी ठीक छौ ?” उन्को पहिलो प्रश्न ।
“I am alright.” अलि रुड्ली जवाफ दिए ।
“म बिमला । घर धरान हो ।” उन्ले फे्रन्डसीपको प्रस्ताव राख्नि ।
“तिमी मास्टर्सको लागि आएको हो?” मैले डाइरेक्टली सोधेँ ।
“नाइ, म नर्स हुँ । मोड्लिङको सिलसिलमा काठमाडौं आएकी थिए । त्यसपछि त्यस्तै पर्यो ।” उन्ले बताइन् ।
(म के सोध्दै थिए, जवाफ के आयो ।)
“यहाँ के कामले आउनुभयो?” उन्लाई सोधेँ ।
“काठमाडौंजस्तो सहरमा यतिकै बस्न गाह्रो हुने रहेछ । तैमाथि म एक्लै छु । धरानमा मेरी आमा भट्टी पसल चलाउनु हुन्छ । बुबाले म सानै छँदा अर्की आमा ल्याएर उनीसँगै बस्नुभयो । हाम्रो जीवन आमाको भट्टी पसलबाट चलेको छ । फेरि म सहर आएपछि खर्चपनि बढेको छ । यता काम पाएको छैन । त्यसैले यो बीचमा खाली रहनुभन्दा कलेज जोइन् गर्दिम् सोचेको हो ।” बिमलाले भनिन् ।
मेरो प्रश्न र उन्को जवाफ मेल भइरहेको थिएन । त्यसैले मैले सोधिहाले ।
“अनि कुन लेभल जोइन् गर्छौ? कुन सब्जेट पढ्ने?”
“खोइ, के पढ्ने? मलाई पढाईमा त्यति रुचि छैन । म त मोडल हुने सपना लिएर आएको थिएँ । सोचेजस्तो नहुने रहेछ । यता त रियालिटी फरक पाएँ । अब आइहालियो केही गरेर मात्र घर फर्कन्छु । ब्याच्लर्समा दुईवटा विषय मेजर हुन्छ रे । मलाई यति थाहा छ ।” उन्ले भनिन् ।
“तिमीलाई के कुरामा इन्ट्रेस्ट छ त्यै चुज गर न ।” उसलाई हौसला दिदैँ भने ।
“सोसियोलोजीसँग मिल्ने कुनै विषय, जुन पास गर्नपनि सजिलो होस् । टाइम कम लागोस् ।” उन्ले मलिन आवाजमा भनिन् ।
मैले आफुलाई थाहा भएसम्मको विषयहरु उन्लाई सेयर गरे । अन्ततः उन्ले म्यूजिक विषय रोजिन् । म काउन्टर छेउ पुगे । एक्जाम फर्म सब्मित गरे । उन्ले पनि आºनो रोजाईको विषयहरुमा मार्क लगाइ फर्म सब्मित गरिन् ।
“म निस्किए है । मलाई अलि हतार छ ।” मैले भने ।
“एकछिन बस न ।” उन्ले रोक्न खोजिन् ।
“मलाई अफिस जान अबेर भइसक्यो ।” (म हतारिएको थिए ।)
“तिम्रो फोन नम्बर देउ न ।” उन्ले ब्यागबाट फोन निकालिन् ।
केहीबेर त भयो चिनेको । कति फास्ट न. मागेको होला । नम्बर दिने कि नदिने भयो । आजकालको जमानामा कसैलाई भर नगर्नु भन्छन् । शंका मै नम्बर दिए । मलाई लाग्यो उनी साथीको खोजीमा थिए । त्यसलै कारण नसोधीकन म नम्बर दिएर हिडेँ ।
“भोलि कलेज पुगेपछि कल् गर्छु, है ।” बिमलाले चित्कार छोडी ।
अलि टाढाबाट आएको आवाजले मेरो शंका स्पष्ट गर्दियो ।
मेरो अस्तित्व म कि मेरो थर? Rose